विवाहको तयारीमा पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशी – Life Nepali
काठमाडौं। फिल्मीखबर, यतिबेला पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री मलिना जोशीको पनि विवाहको चर्चा बढ्दो छ । विवाहका लागि उपयुक्त मानिने मंसिर महिनामा धेरै सम्बन्धहरु जोडिन्छन् । तर, यो वर्षका लागि मंसिर महिनाले बिदा माग्न अब धेरै दिन बाँकी छैन । त्यसैले प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरु अहिले लगनगाँठो कस्न व्यस्त छन् । अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि दुई वर्ष लामो सम्बन्धलाई मंसिरमै विवाहमै परिणत गर्ने निर्णय लिइन् । शनिबार उनले प्रेमी दिपेक्ष विक्रम राणासँग विवाह गरिन् ।
विवाह कहिले गर्ने तयारी छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मलाई जाडो मन पर्दैन । त्यसैले जाडो महिनामा बिहे नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । अहिले मलाई धेरैले विवाह कहिले गर्छौं भनेर सोधिरहेका छन् । सम्भवतः यो वर्ष हुँदैन । अर्को वर्षको बैशाख र जेठभित्र हुनसक्छ । तर, अहिले नै कुनै निश्चित भने भैसकेको छैन ।’ तर, आफू विवाहको तयारीमा भने रहेको उनले बताइन् ।
Previous त्यो रात’ ! रुममा “पुग्नेबित्तिकै पहिलो हग”, ज्व’रो ‘आएजस्तो भयो !!!
Next पत्रकार ऋषि धमलालाई अहिलेसम्मकै ठूलो माला लगाएर भव्य स्वागत !